Ulondolozo lwemihla ngemihla lwejenali yedizili
Kulondolozo lwemihla ngemihla lwejenereyitha yedizili, la manqaku alandelayo kufuneka anikwe ingqwalaselo: Ixabiso lepetroli lanele kwaye lifike ngexesha ...
Ukusetyenziswa kwepetroli kwiDiesel Generator
Isicwangciso seCummins Generator Global Operator Plan (GOP) Ngokubanzi, ukusetyenziswa kwepetroli kwi-100kw idizili generator 21 kg = 26.25 iilitha. Ngokusekwe kweli xabiso, sinako ukubala ukusetyenziswa kwepetroli kumvelisi we-50kw idizili, i-200kw i-generator yedizili, kunye ne-500kw Genset, njalo njalo. Ewe, t ...
Isicwangciso seCummins Generator Global Operator (GOP)
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, i "Global Operator Programme (GOP)" yeShanghai Trade Trade Zone yasungulwa ngokusesikweni ePudong. Ibhetshi yokuqala yeenkampani ezingama-41, kubandakanya ikomkhulu langaphandle, amashishini aphakathi, kunye namashishini abucala, batyikitye isivumelwano semvumelwano sentsebenziswano ne-Free T ...
Ungabandisa njani uBomi beDiesel Generator Set
ngomphathi ku 20-12-31
Ngokubanzi, ukuba umvelisi wedizili unengxaki yokuvelisa, iya kubonakala ngaphakathi kwesiqingatha sonyaka okanye iiyure ezingama-500 zokusebenza. Ke ngoko, ixesha lewaranti yeseti yejenereyitha yedizili ihlala ingunyaka omnye okanye iiyure ezili-1000 zokusebenza, ngokuxhomekeke kwikota eqolileyo yangaphambili. Ukuba kukho ...